ကမ္ဘာပေါ်တွင် ကဏ္ဍစုံကျယ်ပြန့်မှု နှင့် ရှုပ်ထွေးမှုအရှိဆုံး တရုတ်နိုင်ငံ၏ အမြင့်ဆုံး ဒေသရှိ ရေအားလျှပ်စစ်စီမံကိန်း - Xinhua News Agency
ချိန်တူး၊ အောက်တိုဘာ ၅ ရက် (ဆင်ဟွာ)
တရုတ်နိုင်ငံ၏ အမြင့်ဆုံး ဒေသများတွင်တည်ဆောက်ထားသော ရေအားလျှပ်စစ်စီမံကိန်းများအနက် ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်အထက် မီတာ ၃,၀၀၀ ခန့်တွင်တည်ရှိသည့် ရေအားလျှပ်စစ်စီမံကိန်း ကို စက်တင်ဘာ ၂၉ ရက်က စတင်လည်ပတ်အသုံးပြုခဲ့သည်။
စီချွမ်းပြည်နယ်ရှိ တိဘက်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရ ကန်းကျီး ဒေသရှိ ယာလွန်းမြစ်ပေါ်တွင် တည်ဆောက်ထားသည့် လျန်ဟဲခိုးရေအားလျှပ်စစ်စီမံကိန်း၏ ပထမဆုံး လျှပ်စစ်စွမ်းအင် ကီလိုဝပ်နာရီပေါင်း ၅၀၀,၀၀၀ ထုတ်လုပ်ပေးနိုင်သည့် ယူနစ်နှစ်ခုကို စတင်လည်ပတ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ရေအားလျှပ်စစ်စီမံကိန်း ၏ အလုံးစုံလည်ပတ်ရန်ရည်ရွယ်ထားသည့် စွမ်းအင်ပမာဏမှာ စုစုပေါင်း ကီလိုဝပ်နာရီ ၃ သန်း ဖြစ်သည်။
စီမံကိန်းစတင်တည်ဆောက်ရာတွင် သတ်မှတ်ထားသော ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု တန်ဖိုးမှာ ယွမ် ၆၆.၄၆ ဘီလီယံရှိပြီး ၂၀၁၄ ခုနှစ်အောက်တိုဘာလတွင် စတင်အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ခဲ့သည်။ ၂၀၂၃ ခုနှစ်တွင် လုပ်ငန်းအပြည့်အဝ လည်ပတ်ရန်ရည်ရွယ်ထားကြောင်း စီမံကိန်းအား အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်နေသည့်Yalong River Hydropower Development Company, Ltd. (Yalong Hydro) က ဆိုသည်။
ရေလှောင်ကန်၌ ရေသိုလှောင်နိုင်မှုပမာဏမှာ ၁၀.၈ ဘီလီယံ ကုဗမီတာ ဖြစ်ပြီး စီမံကိန်း အပြည့်အဝလည်ပတ်ပါက နှစ်စဉ် လျှပ်စစ်ထုတ်လုပ်နိုင်မှုပမာဏမှာ ကီလိုဝပ်နာရီပေါင်း ၁၁ ဘီလီယံထက်ကျော်လွန်ထုတ်လုပ်နိုင်ရန် ရည်မှန်းထားသည်။
ကျောက်စရစ်မြေသားတမံ အမြင့်မှာ ၂၉၅ မီတာရှိပြီး ယင်းသည် လျှပ်စစ်ထုတ်လုပ်ရေးစီမံကိန်းများထဲတွင် ကမ္ဘာ့ ဒုတိယအမြင့်ဆုံး ကျောက်သားတမံအမျိုးအစားဖြစ်သည်။
ဆည် ၏ ရေသိုလှောင်နိုင်မှုပမာဏစုစုပေါင်းမှာ ကုဗမီတာပေါင်း ၄၃ သန်းခန့်ရှိသည်။
အလွန်အမင်းအေးစက်သည့်ရာသီဥတုနှင့် အောက်ဆီဂျင်မလုံလောက်မှုအခြေအနေများအားဖြေရှင်းရန် ရေလှောင်တမံတည်ဆောက်ရေးတွင် မောင်းသူမဲ့မြေသားလှိမ့်စက်များ အား အသုံးပြုခြင်းဖြင့် ထိရောက်ပြီး ဘေးကင်းသည့်ဆောက်လုပ်ရေးအခြေအနေကိုဖန်တီးဖော်ဆောင်ခဲ့သည်။
ရေလှောင်တမံမြေသားတာတမံဆင်ခြေလျှောအမြင့်မှာ ၆၈၄ မီတာရှိပြီး ၎င်းမှာ ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး ဆင်ခြေလျှောအမြင့်တည်ဆောက်ထားသည့်တမံအမျိုးအစားဖြစ်သည်။
ရေအားလျှပ်စစ်စီမံကိန်း၏ မျှော်စင်အမြင့်သည် ၁၁၅ မီတာ ရှိပြီး ၎င်းအမျိုးအစားများထဲတွင်ကမ္ဘာ့အမြင့်ဆုံးဖြစ်သည်။
စုစုပေါင်း အရှည် ၂၇၆ မီတာ နှင့် အကျယ် ၂၉ မီတာရှိသည့် ရေလှောင်တမံ၏ မြေအောက် စက်ရုံ ၌ မြန်နှုန်းမြင့်ရထား ၈ စင်း ဘေးတိုက်အနေအထားဖြင့် ၈ လိုင်းအထိ ရပ်နားထားနိုင်သည့်အကျယ်အဝန်းရှိသည်။
လျှပ်စစ်စွမ်းအင် ကီလိုဝပ်နာရီပေါင်း ၅၀၀,၀၀၀ ထုတ်လုပ်ပေးနိုင်သည့် ယူနစ်၆ ခုကိုတပ်ဆင်ထားပြီးစုစုပေါင်း လည်ပတ်ရန်ရည်ရွယ်ထားသည့် စွမ်းအင်ပမာဏမှာ ကီလိုဝပ်နာရီပေါင်း ၃ သန်း ဖြစ်သည်။
ရေလွှဲဥမင်၏ ရေစီးနှုန်းအလျင်အမြင့်ဆုံးမှာ တစ်စက္ကန့်ကို ၅၄ မီတာရှိရာ ၎င်းမှာ ကမ္ဘာ့ဒုတိယအမြန်ဆုံး ရေလွှဲနှုန်းအလျင်ဖြစ်ပြီးတရုတ်နိုင်ငံ၌ ပထမဆုံးဖြစ်သည်။
ရေလှောင်တမံစီမံကိန်းတွင် ငါးမွေးမြူရေးနှင့်ငါးလွှတ်စခန်းကိုလည်းထည့်သွင်းထားပြီး ငါးမွေးမြူရေးအထောက်အပံ့အတွက် ယွမ်ငွေသန်း ၁၃၀ ကို အသုံးပြုကာ ငါးမျိုးစိတ်များကိုကာကွယ်ထိန်းသိမ်းရန် ယွမ်ငွေ ၂၇ သန်းကိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားကြောင်းသိရသည်။
နှစ်စဉ် ငါးသားဖောက်ခြင်းနှင့် ငါးလွှတ်ခြင်းလုပ်ငန်းများကို အစီအစဉ်တကျလုပ်ပြီး စုစုပေါင်းငါးသားပေါက် အကောင်ရေ ၅ သိန်းကျော်ကို လွှတ်ထားပေးပြီးဖြစ်သည်။
ရေလှောင်တမံ၌ အမြင့် ၁၇၂ မီတာရှိသည့် အဓိက ထောက်တိုင်ဖြင့်တံတားတည်ဆောက်ထားရာ ၎င်းမှာ တရုတ်နိုင်ငံ၏ လွင်ပြင်နှင့် ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်အမြင့်ပိုင်းဒေသများ၌ ထောက်တိုင်အမြင့်ဆုံးတည်ဆောက်ထားသည့်ပထမဆုံးတံတားဖြစ်သည်။
ရေအားလျှပ်စစ်စီမံကိန်းတွင် စီရင်စုများ၊မြို့နယ်များနှင့်ကျေးရွာများအားချိတ်ဆက်သည့် စုစုပေါင်းအရှည် ၄၉၉ ကီလိုမီတာအရှည်ရှိလမ်းများ၊ အလွန်ကြီးမားသည့်တံတားများနှင့်တံတားကြီးစုစုပေါင်း ၃၂ စင်းနှင့် လျှပ်စစ်ဓါတ်အားလိုင်းအရှည်စုစုပေါင်း ၅၃၀ ကီလိုမီတာခန့် သွယ်တန်းတည်ဆောက်ထားပြီးဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။
ယာလွန်း မြစ်ဝှမ်းဒေသသည် တရုတ်နိုင်ငံ၏ သန့်စင်သည့်စွမ်းအင်အရင်းအမြစ်များထဲတွင်တစ်ခုအပါအဝင်ဖြစ်သည်။ စီမံကိန်းဖော်ဆောင်နေသည့်ယာလွန်းဟိုက်ဒရိုကုမ္ပဏီက လေစွမ်းအင်နှင့် နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်များအပါအဝင် သန့်စင်သောစွမ်းအင် ကီလိုဝပ်နာရီပေါင်း သန်း ၈၀ ခန့်အား ထုတ်လုပ်ကာ ” သန့်ရှင်းသောစွမ်းအင်အရင်းအမြစ်တစ်ခု”အဖြစ် ဖော်ဆောင်ရန် ရန်ရည်ရွယ်ထားကြောင်းသိရသည်။
ယာလွန်းဟိုက်ဒရိုကုမ္ပဏီအနေဖြင့် တရုတ်နိုင်ငံ၏ ကာဘွန်ထုတ်လုပ်မှုလျှော့ချရေး ရည်မှန်းချက်များကို ဖြည့်ဆည်းရန်အလို့ငှာ ယာလွန်းမြစ်ဝှမ်းတစ်လျှောက်တွင် သန့်စင်သောစွမ်းအင်အရင်းအမြစ်များကို တိုးမြှင့်တည်ဆောက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း နှင့် ယာလွန်းဟိုက်ဒရိုကုမ္ပဏီ၏ ရှယ်ယာများကို ထိန်းချုပ်ထားသည့် State Development and Investment Corp., Ltd မှ ဥက္ကဌဖြစ်သူ Bai Tao က ဆိုသည်။
ယင်းရေလှောင်တမံစီမံကိန်းသည် ကမ္ဘာပေါ်တွင် ကဏ္ဍစုံကျယ်ပြန့်မှုနှင့်ရှုပ်ထွေးမှုအရှိဆုံးဖြစ်သည်။
ရေအားလျှပ်စစ်ထုတ်လုပ်ရေးစက်ရုံပြီးစီးပါက ၎င်းသည် နှစ်စဉ် ကျောက်မီးသွေးအသုံးပြုမှုတန်ချိန်ပေါင်း ၁၃.၃ သန်း၊ ကာဘွန်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ် ထုတ်လွှတ်မှုတန်ချိန်ပေါင်း ၂၁.၃ သန်းနှင့် ဆာလ်ဖာဒိုင်အောက်ဆိုဒ် ထုတ်လွှတ်မှုတန်ချိန်ပေါင်း ၂၀၀,၀၀၀ တို့ကို လျှော့ချပေးနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
တရုတ်နိုင်ငံက၂၀၃၀ ပြည့်နှစ်တွင် ကာဘွန်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ် ထုတ်လွှတ်မှုလျှော့ချရန် နှင့် ၂၀၆၀ ပြည့်နှစ်အရောက်တွင် ကာဘွန်ထုတ်လွှတ်မှုကင်းစင်စေရန် ရည်ရွယ်ဆောင်ရွက်မည်ဟုကြေညာခဲ့သည်။ (Xinhua)
CHENGDU, Sept. 30 (Xinhua) — A mega hydropower plant built at an average altitude of 3,000 meters, the highest one of its kind in China, went into operation on Wednesday.
The Yalong River basin is one of China’s clean energy bases. The Yalong Hydro has planned to createa“clean energy corridor” withatotal installed capacity of 80 million kW of clean energy, including wind power and photovoltaic power.
The Yalong Hydro will promote the construction of the clean energy base of the Yalong River basin to contribute to China’s carbon emission reduction goals, said Bai Tao, chairman of the State Development and Investment Corp., Ltd., controlling shareholder of the Yalong Hydro.
China has announced that it would strive to peak carbon dioxide emissions by 2030 and achieve carbon neutrality by 2060. ■
တရုတ်နိုင်ငံ စီချွမ်ပြည်နယ် Atulie’er ကျေးရွာတွင် ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုလျော့ပါးရေး ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုများ မြင်တွေ့ရ